Khilaaf Hor leh oo soo kala Dhax galay Maxkamada Sare iyo Gudoonka Cusub ee Baaramaanka Soomaaliya - iftineducation.com
Khilaaf Hor leh oo soo kala Dhax galay Maxkamada Sare iyo Gudoonka Cusub ee Baaramaanka Soomaaliya
iftineducation.com – Waxaa soo banaan baxay Khilaf Ugub ah oo u dhaxeeya Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Dalka iyo Gudoonka Cusub Baarlamaanka Soomaaliya ee Dhawaan lagu doortay Magaalada Muqdisho.
Khilaafka labada Dhinac ayaa ka dhashay dib usoo celin ay Gudoonka Baarlamaanka kusameeyeen Xubno kamid ahaa ragaii Maxkamada sare ee Dalka u xukmisay in ay kamid Noqdaan Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay horey usoo celiyeen Gudiga Farsamada.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Jawaari ayaa shalay dib usoo celiyay afar kamid ah Xubnihii Maxmakada sare u go’aamisay in ay kamid Noqdaan Baarlamaanka kadib markii Xubnahaasi xubno kale horey Gudiga Farsamada ugu badaleen una sameeyeen Kaararka aqoonsiga.
Gudoomiyaha Maxmakada sare ee Dalka Abuukaate Ceydiid Ilko Xanaf ayaa sheeagy in Gudoonka sare aysan ka ho imaan Karin Go’aanka Maxkamada sare ee Dalka ayna ku dhisan yihiin Gudoonka Baarlamaanak qaab sharci daro ah.
Abuukaate Ceydiid waxa uu sheegay in Gudoonka sare uusan isagu dhaarin sidaa darteedna ay ku dhisanyihiin sharci daro, qaabka ay hada u shaqeeyaana ay tahay si aan sax aheyn ,waxa uuna xusay in aysan jirin cid kahor imaan karto go’aanka Maxkada sare gaarto.
Khilaafkan Cusub ee hada kasoo dhax dhashay Gudoonka Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Maxkamad sare ayaan la ogeyn halka y ku biyo shuban doonto ,iyadoona ay imaaneyso Khilaafkan Xili Maxmada sare Rag ay Horey u diideen Gudiga Farsamada ay u xukmiyeen in kamid Noqdaan Baarlamaaaka Cusub ee Soomaaliya ata aoon wali meel u dhicin.